Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment चुनावको वातावरण छ र ? - Pnpkhabar.com
चुनावको वातावरण छ र ?
काठमाडौं, २५ माघ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चुनावको वातावरण छ कि छैन बारे प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा आइतबार उनले इजलासमा यसबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राजनीतिक शक्तिको असफलता भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा जाने निर्णय गरेको बताए । उनले मुद्दाको फैसला कसैले अनुमान गरेको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार चुनाव हुनुपर्ने बताए ।
अदालतबाट विघटनविरुद्धको मुद्दामा बौद्धिक रुपमा आदर गर्न सकिने, सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्न सकिने र व्यवहारिक खालको फैसला हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गर्दै सबै कुरा जनताले फैसला गर्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले चुनावको वातावरण भए नभएकोबारे प्रश्न गरेका थिए ।
राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक प्रदर्शन भइरहेको प्रति संकेत गर्दै अहिले ‘चुनावको सम्भावना छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् । राणाले प्रश्न गरे, ‘ फ्लोरमा वातावरण हुनुपर्यो नि होइन ? अहिले जुन वातावरण छ, त्यो (चुनाव) सम्भवना छ ?’
जवाफमा भट्टराईले जनताले फैसला गर्ने हो कि श्रीमान भन्दै चुनावको पक्षमा माहोल रहेको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै निरन्तर सडक तातिरहेको बेला अदालतमा पनि यसबारे कुरा उठेको हो ।